हामी यतिबेला प्रतिबन्धित अवस्थाकै बिचमा महासमरमा सहादतप्राप्त सहिदहरूको स्मरण र सम्झनाको भावधारामा २२ औँ सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाइरहेका छौँ । यो दिन जनताका पक्षमा क्रियाशील लेखक, कलाकार, साहित्यकारहरू विशेष संवेदित हुने गर्दछन् । मलाई पनि यो दिनले अलि बढी नै चिमोट्ने गर्दछ । यसपालि झन् अलि बढी चिमोटेको अनुभति गरिरहेको छु ।
देश र जनताका मुक्तिका लागि क्रान्तिकारी धाराको अवलम्बन सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको केन्द्रीय मूल्य हो । जबसम्म नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म जनताको मुक्ति हुँदैन; जबसम्म जनताको मुक्ति हुँदैन, तबसम्म हामी निरन्तर क्रान्तिकारी दिशामा अघि बढिरहन आवश्यक छ भन्न्न भावनालाई हृदयदेखि नै आत्मसात् गरेका लेखक, कलाकार, साहित्यकारहरू यतिबेला सामाजिक फासिवादी ओली मण्डलीद्वारा प्रतिबन्धित गरिएको अवस्थामा छन् । कस्तो अनौठो हगि ! देश र जनताका निम्ति सहिद भएर मर्न चाहन्छु, कहिल्यै पनि गद्दार हुनेछैन भन्ने प्रतिवद्धता गर्ने दिनमा पनि प्रतिबन्धि नै भइरहनुपर्ने ! म भित्रदेखि महसुस गरिरहेको छु, यही भावधारामा डुबुल्किँदै नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारी आवेग र विवेकको द्वन्द्वात्मक स्थितिको ख्याल गरेर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छन् ।
यसो हेर्छु, सहरमा अनेकथरी ‘कम्युनिस्ट’ हरूले पनि सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाइरहेका छन् । सामाजिक फासिवादी ओली सरकार र उसको पार्टी डबल नेकपाले पनि सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाउने नाटक गरिरहेको छ । उसको भव्य मञ्च, भव्य सजावट, शासकीय रवाफ र चर्का–चर्का कुराले एकछिन् टाउको रनन्न पार्छ । तिनको त्यो फगत नाटकले टाउको फुट्लाझैँ गरी दुख्छ । बेस्सरी टाउको समाउँछु । यसो सम्झन्छु, क्रान्तिमा केही नेताहरूले धोका दिन सक्छन्, धोका दिएका पनि छन् तर पनि क्रान्तिको प्रवाह रोकिँदैन र रोकिनु पनि हुन्न, कहाँ रोकिएको छ र ! क्रान्तिको सामूहिकीकरणको चरित्रलाई ख्याल गर्दै यसको ऊध्र्वगामी दिशा पक्रनु आवश्यकता त हो । जनक्रान्तिका माध्यमबाट दलालहरूको लुटको स्वर्ग ध्वस्त बनाउने समय आइसकेको छ किनभने उनीहरू जनताको आधारभूत तहबाट पूरै अलग्गिइसकेका छन् । क्रान्तिकारीहरूले यतिबेला संयुक्त मोर्चा, क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको आवाज बुलन्द गर्दै जनक्रान्तिलाई नयाँ शिराबाट उठाइरहेका छन् । देश, जनता र समाजको मुक्ति, प्रगति र अग्रगामी परिवर्तनका लागि आफूलाई सचेत ढङ्गले बलिदान गर्ने महान् व्यक्ति सहिद हुन्छ । आजभोलि उद्देश्यहीन असचेत मृत्युलाई पनि सहिदी मृत्युमा गणना गर्न थालिएकाले सहिदी–अवमूल्यन हुँदै गएको हो । सामन्तवादले खडा गरेका सबै किसिमका विभेद, दासता, शोषण र दमनका पर्खाल भत्काउन विभिन्न समयमा थुपै्र सपूतहरूले रगत बगाएका छन् । जनमुक्तिको क्षितिज नउघ्रिँदासम्म यो सिलसिला जारी जारी रहनेछ ।
हुन त हो नि ! सहिद भन्दाभन्दै सहिद शब्दकै मूल्य अवमूल्यन गर्ने होड चलेको यतिबेला सबैले सबै किसिमका मानवताविरोधी देशी, विदेशी, उत्पीडित र शोषणबाट मुक्त भएर सुन्दर समाज, सुन्दर जीवन अनि सभ्य र उच्च समाजको निर्माण नहुँदासम्म सहिद हुने प्रक्रिया रोकिँदैन भन्ने कुरालाई हृदयदेखि नै आत्मसात् गरे कति राम्रो हुने थियो ! यसो मान्छेहरूको अनुहार सम्झिन्छु, यसो तिनको जीवन व्यवहार सम्झन्छु । वाकवाकी आउँला जस्तो हुन्छ, भाउन्न छुट्छ । फेरि घोरिन्छु, इतिहासको प्रत्येक चरणमा सहिदहरूको बलिदानले पर्खाल भत्काउँछ र अग्रगामी परिवर्तनको ढोका खोल्छ तर नेपालमा त्यसलाई परिवर्तनकारी जनताले संस्थागत गर्न नपाउँदै सहिदी उद्देश्यलाई कुल्चने काम भएको छ । यो दुःखद् शृङ्खलाको अन्त्यका निम्ति निर्णायक युद्धको आवश्यकता खट्किएको छ । अग्रगामी परिवर्तन र मानवमुक्ति यात्राकै हिस्साका रूपमा नेपालमा जनयुद्धको थालनी भएको थियो । हामी पनि संयोगबश बाँचेका हौँ नि ! जनयुद्ध दासता र पराधीनतालाई अस्वीकार गरेको महान् युद्धको घोषणा थियो, जसमा हजारौँ जनयोद्धाले बलिदान गरे । नेपालको इतिहासमा बलिदानको यो गाथा अद्वितीय छ । जनयुद्धको यही त्याग र समर्पणको जगमा विकास भएको आन्दोलनको लपेटाले सामन्ती राजतन्त्रको गजुरलाई धुलोमा सुताइदिएकै हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालभित्र मात्र होइन, भारतमा विभिन्न मठ–मन्दिरमा गएर आफ्नो राजपाठको रक्षार्थ चरु होमेकै हुन् तर महान् जनताका अगाडि उनको अनेकन् प्रयासले केही काम गरेन । ओहो आजको लोकतन्त्र ! यो त लुटतन्त्र हो लुटतन्त्र ! देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिए पनि देश र जनताको अवस्था झन्भन्दा झन् दयनीय हुँदै गएको छ । यो व्यवस्था जनताको हाइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ । गाउँ, सहर, पहाड, मधेस सबैतिर यसो हेर्छु, यसले अग्रगामी परिवर्तनका ढोका फेरि पनि अवरुद्ध भएको पाउँछु । राज्यसत्तामा प्रतिगामी चिन्तन हावी भएकोले दुःखद् शृङ्खलाको पुनरावृत्ति नै भएको पाउँछु ।
हैट मन पनि कस्तो ! कता कता वहकिएला जस्तो । मैले केही सहिद परिवारलाई भेटेको छु, कुरा गरेको छु, त्यसले मलाई निकै पीडा दिन्छ । सहिद कोही कसैको कमाइखाने ट्रेडमार्क थिएन । सहिद कुनै एक्लो व्यक्ति होइन; त्यो मुक्ति, क्रान्ति, प्रगति, न्याय, समानता, र अग्रगामी परिवर्तनको समष्टि हो । साथै, त्यो हरेक गद्दारी, आत्मसमर्पण, बेइमानी र विसर्जन विरुद्धको खबरदारी पनि हो । त्यो त्याग, बलिदान, समर्पण, उदात्तता, मानिसको सुन्दर भविष्य र जनकल्याणको प्रतिबिम्बन हो । त्यो मुक्ति र स्वतन्त्रताको कहिल्यै ननिभ्ने ज्योतिपुञ्ज हो । त्यसैले सहिदसँग जीवनको स्पन्दन छ, सुन्दरता छ, गन्तव्य छ अनि परिवर्तनको अविरल धारा छ । मानवमुक्ति, उन्नति र प्रगतिका मूल्य, विचार र आदर्शहरूमा सहिद बाँचेको हुन्छ । सहिदको आदर्श ओझेलमा पार्नु भनेको अधोगति हुनु हो । ऐतिहासिक क्रममा सहिदका उद्देश्य एवम् आदर्शहरू प्रगतिशील र सर्वकालिक हुन्छन् । ऐतिहासिक परम्पराको यही कडीमै जनयुद्धका सहिदहरूसँग विगत र वर्तमान एकीकृत जनक्रान्तिका सहिदहरू अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । यो महान् प्रक्रियामा एकीकृत जनक्रान्तिका धनरूप बटाला, कुमार पौडेल, चन्द्रबहादुर सिंह ‘सनराइज’, तीर्थ घिमिरे ‘राजु’, गोकुल राना मगर ‘महान्’, विभुराम विक ‘दीपेन्द्र’, प्रज्वल शाही ‘प्रज्वल’, विष्णु भण्डारी ‘निरन्तर’, निरकुमार राई ‘प्रशान्त’, रामकुमार श्रेष्ठ ‘रविन’, रामबहादुर सिंह ‘राजेश’ हरूको सहादत उच्च र आदर्शयुक्त रहेको छ ।
मेरो दाहिनातर्फ भित्तामा कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ तस्बिर झुन्डिरहेको छ । इच्छुकले हामीलाई निरन्तर अघि बढ्ने ऊर्जा दिइरहनुभएको छ । फेरि, यतिखेर नेपाल वर्गयुद्धको तुफानी शृङ्खलाको अर्को मोडमा उभिएको छ । जनता दश वर्षको वर्गयुद्धले ल्याएको उथल–पुथललाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छन् । असजिलो परिस्थितिका बिचमा निरन्तर अघि बढ्न इच्छुक हाम्रा प्रेरणा हुन् । सहिदका सपना पूरा भएका छैनन् । त्यो पूरा गर्ने दायित्व क्रान्तिकारीहरूकै काँधमा छ । सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको औचित्य पनि यसैमा सङ्केन्द्रित छ । महान् सहिदहरूका रगतले लेखेको इतिहास, उनको जीवनोत्सर्ग, आस्था, उनका बलिदानको सपना र विचारको निष्ठाले औँला ठड्याएर आज पनि हामीलाई सचेतना दिइरहेको छ– सर्वहारा–कम्युनिस्टको सत्ता स्थापनाको सङ्कल्प नछोड्नू; समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको समाज स्थापना गर्ने दृढ अठोट नबिर्सनू; सामन्ती र साम्राज्यवादी उत्पीडन, दमन र शोषणका विरुद्ध सधैँ जागिरहने निष्ठा र समर्मणलाई नछोड्नू आदि । हामीलाई प्रतिरोध, त्याग, बलिदान र वर्गसङ्घर्षको संस्कृतिलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सन्देश दिइरहेका छन् । शौर्य, साहस र वीरतापूर्ण वर्गसंस्कृतिको स्मरण गराइरहेछन् ।
कम्प्युटरको स्क्रिनमा अनेकोटमा सहादतप्राप्त सांस्कृतिक सहिदहरूको तस्बिरले एकछिन् अर्कै संसारमा पु¥याउँछ । अनि अनेकोटको भूगोल छाम्न पुग्छ, ओहो अनेकोटको त्यो खण्डहर घर र बस्तीहरू ! अन िअनुभूति गर्छु, यी बस्तीले आफ्ना प्रिय छोराछोरीसितको भौतिक विछोडको पीडा भनिसाध्य छैन । अनेकोट यस्तो महान् भूमि हो, जहाँ सातजना सांस्कृतिक योद्धाले मुक्तिका लागि क्रान्तिको बेदीमा आत्माहुति चढाएका थिए । २०५५ सालको चैत ५ गतेको दिन तत्कालीन बर्बर र अमानवीय तानाशाही सत्ताले काभ्रेको अनेकोटमा सशस्त्र घेरा हाली कुची, कलम र मादलका माध्यमबाट वर्गीय विचार र आस्थामा प्रतिवद्ध निःशस्त्र जनकलाकारहरूलाई ज्यूँदै आगो लगाएर मारेको थियो । अछामको डुङ्गलामा नौजना, रोल्पाको भाबाङमा एघारजना तथा डोटीको मुडभरा, अछामकै विनायकमा पनि जनकलाकारको सामूहिक सहादत भएको थियो ।
नयाँ विचारको निर्माण गर्दै यस शताब्दीमा विश्वकै सर्वहारावर्गलाई निर्देशित गर्ने नयाँ जनक्रान्तिको सूत्रपात नेपालबाट भएको छ । यतिखेर आमूल परिवर्तनकामी सहचारी वर्गमुक्तिका पक्षधर शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर अघि बढ्नुपर्ने अनिवार्यता पनि हाम्रोसामु छ । अझ ‘समाजवादी’ ओली सरकारद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको यस स्थितिमा सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाउनुको अर्थ जनमुक्तिको महान् अभियानात्मक प्रवाहमा न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई मोर्चाबन्दी गरी प्रतिरोध सङ्घर्षमा उत्रनु हो । अझै पनि मुक्तिकामी जनताले आमूल परिवर्तनको आशा मारिसकेका छैनन् । सहिदको सपना क्रान्ति थियो, वर्गीय मुक्ति थियो । वास्तविक अर्थमा सहिदलाई सम्झनु चानचुने कुरा होइन ।
आज सांस्कृतिक आन्दोलनबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थालेका छन् । चिन्ताहरू व्यक्त हुन थालेका छन् । योसित प्रतिभाहरूको केन्द्रीकरण र वैचारिक आधारको ठूलो भूमिका हुने गर्दछ । आज प्रतिभाहरू र तिनका वैचारिक आधारलाई जोगाउन हम्मेहम्मे हुँदै गएको छ । फासिवादी बन्दुकका विरुद्ध जनताको तहबाट बन्दुक उठ्नु युद्धको सामान्य नियम हो । संशोधनवाद संशोधनवाद नै हो, साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद नै हो, क्रान्तिकारी क्रान्तिकारी नै हो । संस्कृतिकर्मीहरूले सीआईए, ‘रअ’ का कथित मास्टर माइन्डमाथि आफ्नो निशाना लगाउन ढिलाइ हुँदै गएको छ । सीआईए र रअका नेपाली प्रतिनिधिहरूबाट जनअपेक्षा गर्नु र दर्शनढुङ्गाबाट चल्ला कोरल्नु उस्तै कुरा हुन् । प्वाँखभन्दा हलुका मृत्यु रोजेकाहरूको के कुरा गर्नू र ! जनता महान् सपनाका साथ बाँचिरहेका छन् भने नवसंशोधनवादी–दक्षिणपन्थीहरू मर्दै गइरहेका छन् । सहिदहरूलाई सम्झनु भनेको देश र जनताका पक्षमा आन्दोलित हुनु पनि हो । विचार, बलिदान, विश्वास र रूपान्तरण सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको अर्थबोध गर्नुपर्ने विषय हुन् । जनताको गीत गाउँदै हिँड्नेक्रममा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घ (तत्कालीन सङ्घ) का केन्द्रीय सदस्य च्याङ्बा लामासहित सातजना कलाकारहरूलाई तत्कालीन सत्ताले नियन्त्रणमा लिएर जिउँदै आगो झोसेर हत्या गरेको दिनलाई प्रतिनिधिमूलक दिनको रूपमा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले हरेक वर्षको चैत ५ लाई सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । महासङ्घले रोल्पाको भाबाङलगायतका सामूहिक हत्याकाण्ड र देशैभरका सांस्कृतिक सहिदलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूका सपनालाई पूरा गर्नका लागि प्रण गर्ने दिनको रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
कृषि सुधार्ने पाँच कार्यक्रम
-घनश्याम भूसाल, मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास
यो कार्यक्रम दुई महिना अगाडि नै होओस् भन्ने हाम्रा शुभचिन्तकहरुको चाहना थियो । तर कृषि क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल, विद्यमान नीतिनिययमहरुको आवश्यक अध्ययन र स्रोतसाधनको स्थितिको लेखाजोखा नगरी अगाडि आउनु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । विषयको गम्भीरता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनु भएका सुझाव र निर्देशनका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका अनुभवहरुलाई ध्यान दिनु र विभिन्न कोणबाट धैर्यतापूर्वक अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो । आज विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई प्रभावित पारिहेको छ तापनि आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे छलफल गर्नु उचित नै हुन्छ भन्ने ठानेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
हाम्रो कृषि विकासको इतिहासको एउटा टड्कारो अनुभव के छ भने किसानलाई विकास दिनसक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन हामीले लामो समय खर्च गर्‍यौँ । कृषिको विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘हामी पर्याप्त बलियो नभएर’ भन्ने दियौँ । परिणाम के भयो भने हामी साधन–श्रोत र कानूनले बलियो हुँदै गयौँ तर किसान र कृषि बलियो भएनन् । दातृ निकायको सहयोगले नेपालको कृषिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेनौं । आज हामी जता जान खोज्दैछौँ त्यसले इतिहासको त्यो दुश्चक्र तोड्छ भन्ने हामीलार्ई लाग्छ ।
बलियो सामाजिक–आर्थिक जीवनमा नटेकेको लोकतन्त्र सँधै खतरामा रहन्छ । नेपालको सामाजिक–आर्र्थिक जीवनमा कृषि क्षेत्रको महत्व कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान र यसमा संलग्न÷आश्रित जनसङ्ख्याले बताउँछ । यसर्थ हाम्रो राजनीतिक तथा संवैधानिक गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ । यसरी हेर्दा किसानको सुरक्षा र कृषि उत्पादनको विकास केवल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक मामिलामात्र होइन बरु सामाजिक तथा राजनीतिक विषय पनि हो ।
कृषि विकासका लागि मूलतः दुईवटा समस्या छन् ः एकातिर यो सबैभन्दा दुखको, गाह्रोे काम हो भने अर्कोतिर यो बचत नहुने वा असाध्यै कम बचत हुने क्षेत्र हो । यान्त्रिकीकरणले गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ । तर, बचत वा नाफाको झण्डाले अगाडिबाट डो¥याएन भने हाम्रा उदात्त भावनापूर्ण अपीलका प्रभावले यान्त्रिकीरण आफै नहुँदो रहेछ । आर्थिक उत्पादनको कटु इतिहासले त्यसै भन्छ । त्यसैले, कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषिकर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनै पर्छ । हामीले भन्दै आएका कृषिमा अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजानेछ र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्नेछ ।
कृषि उत्पादन र बचत नै त्यस्तो इन्जिन हुनेछ जसले औद्योगीकरण÷उद्यमीकरणको वास्तविक आधार तयार गर्नेछ । हामीले युवा बेरोजगारी र वैदेशिक श्रम बजारमा हाम्रा नौजवानहरुको दारुण कथा सुने–सुनाएका छौँ । यो नै त्यस्तो सन्देश हो, जसले सूदुर मरुभूमि, खतरनाक र अपमानपूर्ण कार्यक्षेत्रमा रगत–पसिना बगाइरहेका हाम्रा नौजवान छोराछोरीलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नेछ । यो काम सजिलो अवश्य छैन तर आजको राज्य (सरकार) ले बोक्नै पर्ने कार्यभार हो ।
यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कृषि उत्पादन व्यवस्थातर्फ पहलकदमी लिनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेको छ । त्यस कृषि उत्पादन व्यवस्थाका निम्नानुसार पाँच नीतिगत आधार हुनेछन् :
उत्पादन सामग्रीमा अनुदान : हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ । तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ ।
सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा ः हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गरिने छ ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमा ः कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्‍याउने ग्यारेण्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालि–वस्तुको हानीनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।
न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी : किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।
हाम्रा यी नीतिगत आधारहरुको प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन् । अब हाम्रा उपलब्धी कति किसानलाई उपरोक्त कृषि उत्पादन व्यवस्थाभित्र ल्याइयो भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ । यी नीतिगत आधारहरुको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्नेछन् । हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट एवम् वैदेशिक सहयोग तथा हाम्रो समस्त भौतिक तथा मानवीय साधन–श्रोत उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिनेछ । परिणामतः कृषिमा रहेको हरेक व्यक्ति न्यूनतम बचतकोे भागिदार छ भन्ने कुरा ग्यारण्टी हुनेछ । संक्षेपमा, ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को आकाङ्क्षा मूर्त हुँदै जानेछ ।
सानो भूस्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नयाँ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारीताको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । जहाँसम्म नीजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो नीजी क्षेत्र नै किसान हुन् । सहकारी र नीजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ । यी नीतिगत आधारको अभ्यासका क्रममा हाम्रा सामु अनगिन्ती प्रश्नहरु आउनेछन् ती सबैको जवाफ हामीले कामबाट दिनुपर्नेछ, अनेक सीमा, र कमजोरीहरु प्रकट हुनसक्नेछन् ती सबैलाई सुधार्नु पर्नेछ ।
आज हामीले जुन कुरा सार्वजनिक गरेका छौँ यो आगामी दिनमा हामी आफैलाई निर्देशित गर्न, आफ्नै परिक्षा लिन अघि सारिएका लक्ष्य र प्रश्नहरु हुन् । यी प्रश्नको सार्थक उत्तर दिनु हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । भएको सामथ्र्य र इमानका बलमा सबै परिक्षामा हामी राम्रोसँग उत्तिर्ण हुनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छौँ ।
चार महिनाका २१ कार्यक्रम
मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारी आचारसंहिता र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाई लागूू गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरुसँग नीति र कार्यक्रमहरुमा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिएको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच कृषिका नीति, योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्न संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रीस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ र संघीय सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सचिवहरु रहेको सचिवस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिएको छ ।
गत मार्ग २२ गते र फाल्गुण २५ र २६ गते मा उक्त समन्वय संयन्त्रको बैठक बसी दुवै तहका सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्यमा कृषिका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संयुक्त कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्ने समझदारी गरिएको छ ।
रासायनिक मलको उपलब्धता र वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएको छ । काबु बाहिरको विषम परिस्थिति बाहेक यस वर्षका लागि पर्याप्त रासायनिक मलको उपलब्धता हुने व्यवस्था गरिएको छ । मल वितरणमा हुने चुहावट र ढिलासुस्तीलाई रोक्न Fertilizer Tracking System का लागि Software प्रणाालीमा लैजान लागिएको र बितरण प्रणाली चुस्त बनाउन नया निर्देशिका तयार गरिएको छ ।
लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र कपास विकास समितिमा खुला प्रतिष्पर्धा मार्फत् पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गरिएको छ ।
दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पूर्णता दिइएको छ ।
हामीले लेख्दै र बोल्दै आएको प्राङ्गारिक तथा जैविक कृषि प्रवर्धनका लागि यस मन्त्रालयमा आवश्यक संरचना ‘पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन एकाई’ स्थापना गरी काम आरम्भ गरिएको छ । गत बर्ष गठीत कार्यदलले दिएको प्रतिबेदनको कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा ‘वर्णशंकर जात बिकास ईकाई’ (Hybrid Unit) स्थापना गरी देशभित्र नै बालीनालीका वर्णशंकर जात विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
उखु उत्पादक किसानलाई यस मन्त्रालयबाट दिईँदै आएको अनुदान रकम किसानकै बैंक खातामा उपलब्ध गराइने कार्यबिधीको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट विचौलिया र अनावश्यक पक्षको चलखेल अन्त्य भएको छ ।
गरिमा धानको नाममा आएको बीउबाट हुन गएको क्षतिबारे बीउ आयातकर्तालाई नगद जरिवाना र अनुमति प्रमाणपत्र निलम्बनको कारवाही गरिएको, आयातकर्ता कम्पनीको अनुमति प्रमाणपत्र खारेजीको कारवाही कानूनी प्रक्रियामा रहेको र पीडित किसानहरुलाई नगद राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।
तीन दशक भन्दा लामो समयसम्म अद्याबधिक नभएको ‘कृषि तथ्याङ्क प्रणाली’लाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क प्रणाली विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ । आगामी वर्षदेखि हामीसँग सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकोले ‘कृषि ऐन’ निर्माणको कार्य यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको प्रभावकारिता र अबको कार्यादेश बारे गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ ।यस परियोजनाबाट शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरी पेश्कीसमेत लिएर निर्धारित समयामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नगरेका ६ वटा कम्पनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गरी उनीहरूको बैंक धरौटीबाट पेश्कीबापतको रकम असुलउपर गरिएको छ ।
धेरै परिमाणमा आयात हुने कृषि उपजहरू धान, मकै, आलु, स्याउ, माछा, दूध र मासु लगायतका मुख्य बालीवस्तुहरुको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रममा केन्द्रित हुन तीनै तहका सरकारबीच वातावरण बनाइएको छ । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य सहितको योजना तयार गरिएको छ । निर्यातको सम्भावना बोकेका बालीवस्तुहरू खासगरी अलैंची, चिया, कफी र अदुवाको प्रवद्र्धनका लागि ठोस योजना बनाइएको छ ।
उन्नत नश्लका पशुपन्छी, बीउविजन, बेर्ना र बिरुवामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै सरकारी फार्म केन्द्र र कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र र साधनश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण भएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ परिवर्तित सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गर्नका लागि प्रकृया आरभ्म भएको छ ।
संघीय प्रशासनिक संरचनाहरूमा व्यवस्थापन सर्भे गरी चुस्त र प्रभावकारी संगठन संरचना बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
कृषि अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित नीतिहरुमा छलफल र अन्तक्र्रिया गर्न मन्त्रालयमा नियमितरुपमा ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
पशु कल्याण ऐन तयारीका लागि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृतीका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको छ । एक स्वास्थ्य रणनीति स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता नियामावली र बिषादी ब्यवस्थापन नियमावली को अन्तिम मस्यौदा तयारी हुने क्रममा छ ।
(बुधबार मन्त्री भूसालले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको सम्पादित अंश)
नमस्कार नै किन ?
हामी आदरणीयहरूलाई नमस्कार मुद्रामा प्रणाम गर्छौं । विभिन्न संस्कारमध्ये नमस्कार गर्नु एउटा संस्कार हो । नमस्कार एउटा यौगिक प्रक्रिया पनि हो । नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम हाम्रो परम्रागत अभिवादन शैली हो । हामी कसैसँग भेट हुँदा दुई हात जोडेर नमस्कार गर्छौं । नमस्ते भन्छौँ । यसो गर्दा माया, ममता र सम्मान सबै पुग्छ । शिष्टाचारको पालन हुन्छ । हाम्रो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ ।
हाम्रा पूर्वजले चलाएका चलन कति वैज्ञानिक छन् र हानिरहित छन्, अहिले आएर प्रमाणित हुन थालेको छ । अहिले कोरोनाको प्रकोपले गर्दा एकआपसमा हात मिलाउन नहुने भएपछि देश, विदेशमा अभिवादनको समस्या देखिएको छ । हात मिलाउन, अँगालो हाल्नु हानिकारक छ । मुख मिलाउनु अर्थात् चुम्बन गर्नु अझ हानिकारक छ । अब अभिवादन कसरी गर्ने ? कतै मानिस गोडा मिलाउन थालेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । दृश्य अनुभूति कुनै पनि सजिलो र स्वाभाविक छैन ।
अहिले सबैले नमस्ते अर्थात् नमस्कारको महत्वबोध गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नमस्कार नै अभिवादनको सर्वोत्तम प्रणाली हो । नमस्कार ! आपसी अभिवादनको सुन्दर र हानिरहित प्रणाली मात्र होइन । नमस्कार गर्नुका अतिरिक्त फाइदा पनि छन् । रोग सर्ने डर छैन, अभिवादन पनि भव्य बन्छ । संसारका सबैले नमस्कारलाई नै अभिवादनको शैलीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आज देखिएको छ । हाम्रा पूर्वजले नमस्कारलाई अभिवादनका रूपमा चलनमा ल्याउनुका थुप्रै कारण छन् ।
हाम्रा धर्म संस्कृतिमा मानिसको संस्कार तथा व्यक्तित्व निर्माणका प्रयासका साथै स्वास्थ्य रक्षासँग सम्बन्धित नियम पनि समावेश गरिएका छन् । बिहान उठेर गरिने सूर्य नमस्कारमा मात्र पनि हामी शालीनता योग र मुद्रा जस्ता मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य निर्माणमा अनेकौँ उद्देश्य समाविष्ट रहेका पाउन सक्छौँ । पतञ्जलिको योग सूत्रमा सूर्य नमस्कार नामक एउटा छुट्टै योगविधि पनि छ जो यौगिक क्रियाको सरल र सर्वोत्तम सङ्कलन पनि हो । मान्यजनलाई हात जोडेर नमस्कार, प्रणाम गर्ने चलन हाम्रो समाजमा सनातनदेखिकै परम्परा हो । सामाजिक सांस्कृतिक महत्वका साथै योग वैज्ञानिक महत्व पनि हुनु यसको थप विशेषता हो  ।
हाम्रा हातमा/हत्केलामा शरीरको स्वास्थ्योपचारका अनेकौँ महत्वपूर्ण बिन्दु छन् । हत्केलाका औँलाहरूमै पनि एक्युपे्रसरका विभिन्न बिन्दु छन् । नमस्कार गर्दा ती सबै बिन्दु दबिन्छन् । यसरी दबाब दिने पद्धतिलाई एक्युप्रेसर भनिन्छ । अझ सुजोक चिकित्साविधिमा यसको सूक्ष्म अध्ययन र प्रयोग पाइन्छ । वैदिक मर्मचिकित्साबाट विकसित यी विधि विश्वमा सर्वसम्मत नै बनिसकेका छन् । एक्युप्रेसर चिकित्साको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नमस्कार पनि यसको एउटा समवेत रूपमा चल्तीमा ल्याएको संर्किषप्त पद्धतिका रूपमा देखापर्छ । मुद्रा योगका दृष्टिले पनि नमस्कारको छुट्टै महत्व छ । हामी हाम्रा मन्दिरहरूमा नमस्कार मुद्रामा रहेका कति मूर्तिहरू देख्छौँ । यसको अन्तर्यमा नमस्कारको सर्वतोमुखी महत्वबोधले काम गरेको छ ।
यौगिक उपचार विधिका दृष्टिले नमस्कारले हाम्रो दिमागको दुवै भागलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत मिल्छ । मनमा शान्त र चित्तमा एकाग्रता आउँछ । तनाव, अवसाद आदि रोग हटाउँछ । रक्त सञ्चारलाई नियमित बनाउँछ र नाडी संस्थानलाई स्वस्थ बनाउँछ । भजन कीर्तन गर्दा पनि हामी दुवै हत्केला बारम्बार जोड्छौँ र आवाज निकाल्छौँ । यसमा आवाजको महत्व आफ्नै छ । यो एक किसिमको हाते सङ्गीत पनि हो । यसरी हात पड्काउँदा नमस्कार मुद्रामा जोडिँदा सक्रिय रूपमा मुद्रा र एक्युप्रेसरको काम पनि भइरहेको हुन्छ । यसरी भजन कीर्तनका साथमा निश्चित लयमा हात पड्काउनु पनि धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
नमस्तेलाई अञ्जली मुद्रा पनि भनिन्छ । ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा, अपान मुद्रा आदि विभिन्न मुद्राको आ–आफ्नै फाइदा छन् । मुद्रा शरीरको ऊर्जा जगाउने स्वीच बोर्ड हो । मुद्राले चक्रलाई सशक्त बनाउँछ, ब्युँझाउँछ । शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक शक्ति बढाउँछ । मुद्राले त्रिदोष अर्थात् कफदोष, वातदोष र पित्तदोषलाई शमन गर्छ र यिनका बीचमा सन्तुलन कायम गर्छ । दुवै हात जोडेर छाती अगाडि राखेर नमस्कार गर्नुले हृदय चक्रलाई सशक्त बनाउँछ । हामी मान्यजनका अगाडि झुकेर नमस्कार गर्छौं । भगवान्को अगाडि पनि शिर झुकाएर नमस्कार गर्छौं । दुई हातका हत्केला जोडर शिर निहुराउनु नै नमस्कार हो । नमस्कार गर्दा निधारको आज्ञाचक्रमा छुवाएर ग¥यौँ भने हाम्रो आज्ञाचक्रमा सक्रियता बढ्छ । एकाग्रता बढ्छ ।
हात जोडेर हामी कराउन सक्दैनौँ, रिसाउन सक्दैनौं, भाग्न सक्दैनौँ । यसकारण नमस्ते एउटा आत्म नियन्त्रणको मुद्रा पनि हो । विनम्रताको मुद्रा पनि हो । नमस्कार गर्दा हाम्रो विनम्रताले अगाडिको व्यक्ति प्रभावित हुन्छ । नमस्कारको अर्थमै यो कुरा झल्केको छ । ‘म नमन गर्छु । म तपाईंको अगाडि सम्मानको साथ झुकिरहेको छु’ यस्तो अर्थ हो । साथीभाइ, अग्रज र मान्यजनलाई देख्नेबित्तिकै अभिवादनको रूपमा मात्र नमस्ते गरिआएका हामी अब आफ्नो स्वास्थ्यका लागि पनि नमस्कार गर्ने गरौँ । बिहान ब्युँझिनेबित्तिकै ओछ्यानमै जीवन र जगत्लाई केही समय नमस्कार गरौँ । पञ्चतत्वप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरौँ । दिनभरिको ऊर्जालाई बढाऔं ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा र यथार्थ
-डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी
सम्भवतः विगतमा नेपालले यति अनुभवी अर्थमन्त्री भेटेको थिएन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै २०७४ साल फागुनमा पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए ।
अहिले दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका अनुभवी अर्थमन्त्रीले २ वर्षभन्दा कमको कार्यकालमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सहित २ आवको बजेट पेश गरे । अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत अनुभव तथा बजेट समूहमा कार्यरत रहेका अनुभवी व्यक्तिले बनाएको बजेटको रूपमा बुझिन्छ, यिनलाई हेरिन्छ ।
आव २०७६/०७७ को बजेटले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसंस्कृत एवम् कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माणको उद्देश्य राखेको छ । पूर्ण लोकतन्त्र तथा समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । दुई अंकनजिकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पृष्ठभूमिको चर्चा पनि गरिएको छ ।
बजेटको कार्यान्वनमा देखिएको अवस्थाबाट हाम्रो अर्थतन्त्र तथा कार्यान्वयनमा काम गर्ने निकाय कति सबल छन् ? त्यो छर्लङ्ग हुन्छ । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २७ दशमलव ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, जुन अघिलो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ प्रतिशतले कम छ । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा चालू खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ३२ दशमलव ४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो परिमाण अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा २.७० प्रतिशत कम देखिन्छ ।
चालू आवको पहिलो ६ महिनामा विकास (पुँजीगत) खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको १५ दशमलव ४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो अघिलो आर्थिक वर्षको सो अवधिको तुलनामा २.३० प्रतिशत कम हो । यसरी चालू आवको पहिलो अर्ध वार्षिकसम्म १५ दशमलव ४० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च हुनुमा पटकपटक खरीद नियमावली संशोधन, लामो समयसम्म काम गर्न नसकेका ठेकदारहरूमाथि कारबाही नहुनु, नेपालको मुख्य पुँजीगत खर्चको ठेक्का १८–२० जना ठेकेदारको हातमा जानु, कमिशनको चलखेल हुनुजस्ता कारण छन् ।
निवर्तमान सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटोको केही दिनअघि सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरण र राजीनामाले पनि आर्थिक अनियमितता र चलखेललाई पुष्टि गर्छ । सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माणको उद्देश्य भए पनि पूर्वमन्त्री, सचिव, अधिकृत तथा बहालवाला मन्त्री, सचिव, अधिकृतदेखि पियनसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारका संयन्त्र तथा कानून पूर्ण छैनन् । सरकारले चाहेअनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेर ठूलो अकारको बजेट ९० दशमलव ४० प्रतिशतमा झारेको छ ।
ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्न जनतामाथि संघीय कर, प्रादेशिक कर र स्थानीय कर गरी विभिन्न किसिमको करको बोझ थपिन्छ । नेपाल सरकारले जनतामाथि कति बढी कर थुपारेको छ, त्यो हेरौं । यसका लागि नेपाल र भारतमा रहेको करको दरको अन्तर विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यसका लागि आयको सीमा २५ लाख रुपैयाँलाई आधार मानौं ।
नेपालमा नेपाली रुपैयाँ २५ लाख आय आर्जन गर्नेले ६ लाख २० हजार कर तिर्नुपर्छ । भारतमा नेपाली रुपैयाँ २५ लाख आय आर्जन गर्नेले जम्मा नेपाली रुपैयाँ ३ लाख १० हजारबराबरको कर तिर्नुपर्छ । भारतमा साधारण व्यवसाय करको दर १५ प्रतिशत छ । नेपालमा साधारण व्यवसाय करको दर २५ प्रतिशत छ । यसरी नेपाल सरकारले एकातिर पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
अर्कोतिर मित्रराष्ट्र भारतको केन्द्रीय बजेट २०२०/०२१ मा भारतले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदानमा ३३ दशमलव ३३ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । सम्भवतः यसबाट पर्न सक्ने असरलाई कम गर्न सरकारले यही फागुन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर थप गरी १० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ? गत आवको जेठ १५ गतेदेखि डिजेल तथा पेट्रोलमा दिँदै आएको मूल्यअभिवृद्घि कर फिर्ता रोक लगाउनु, नेपालमा पिठोमा कहिल्यै नलागेको मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउनु, मालवस्तु ढुवानीमा मूल्यअभिवृद्घि कर लगाउनु, किताबको अयातमा भन्सार कर अनिवार्य गर्नु र ढुवानीमा पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउनुजस्ता कारणले औसत मुद्रास्फीति ६ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको बताइन्छ । जब कि, वास्तविक बजारमा मुद्रास्फीति २ अंकको रहेको बुझिन्छ ।
नेपालको वनमा साललगायत विभिन्न काठ कुहिरहेका छन् । तर विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ, जसबापत अर्बौं रुपयाँ बाहिर गइरहेको छ । यसले व्यापारघाटा बढेको छ । यसरी आफ्नो देशमा रहेको सम्पदा, मालवस्तुको संरक्षण नगरी अयातमा भर पर्दै गएमा कसरी समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको सपना पूरा हुन्छ ?
जनतालाई करको बोझबाट बचाउन सानो आकारको जनउत्तरदायी बजेट निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ । करको दरभन्दा दायरा बढाई, जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्न दिएको रकमको अकार घटाई, खुला सिमानाका कारण भइरहेको राजस्व चुहावट र कालो धन नियन्त्रण गरी जनउत्तरदायी बजेट निर्माण गरेको खण्डमा समृद्घ नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ ।
सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताको वागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भयो । झन्डै दुईतिहाई नजिक रहेको सरकारले समाजवादी पार्टीसँग मिलेर दुईतिहाइ बनाई आरामपूर्वक सरकार सञ्चालन गर्‍यो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका करिब–करिब शान्तजस्तै थियो । एकाध विषयभन्दा बाहेक अन्य धेरै विषयमा प्रतिपक्षी मौन नै बस्यो । राष्ट्रिय जनता पार्टीको पनि सशक्त भूमिका देखिएन । प्रतिपक्षी पार्टीहरू आन्तरिक किचलोमै रुमल्लिरहे । भारी बहुमतको सरकारलाई विकासको एजेन्डा पूरा गर्न सकिएन भन्ने बहानाहरू केही पनि बाँकी थिएनन् । अर्थात् भनौं विकासको एजेन्डालाई अगाडि लैजानका लागि कुनै बाधक तत्वहरू थिएनन्, जसरी जुन रफ्तारमा अघि बढ्छु भन्नका लागि पनि मार्ग प्रशस्तै थिए ।
सरकारले दुई वर्ष व्यतीत गर्‍यो । सरकारका दुईवर्षे उपलब्धिलाई केही सञ्चारमाध्यमले निकै महत्वका साथ प्रकाशन गरे । केही उपलब्धि निश्चय नै भएका छन् । जनताले स्थायी सरकारको अनुभूति गर्न पाएको पहिलो घटना नै होला । यसअघि कांग्रेसको बहुमतको सरकार पनि पाँच वर्ष टिक्न पाएन । यो सरकार पाँच वर्ष टिक्ने निश्चितप्रायः छ । अझ भनौं, बीचमा केही घटना नभए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नुहुनेछ । गोरखापत्रका पानाहरू सरकारका उपलब्धिले भरिएका छन् । अन्य पत्रिकाहरूले सरकारले खासै उपलब्धि गर्न नसकेको विषयवस्तुहरूलाई उल्लेख गरेका छन् ।
चुनावको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्रमा धेरै विषयवस्तुको उठान गर्‍यो । सरकारमा आउँदा पूर्वश्चिम रेल, उत्तर दक्षिण रेल, सप्तकोसीमा पानीजहाज, बृद्धहरूलाई ५ हजार मासिक भत्ता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा, एकवर्ष भित्रै तुइनको प्रतिस्थापन, काठमाडौंमा पेट्रोलियम गाडीको प्रतिस्थापन, परिमार्जित शिक्षा नीति जसमा ३० प्रतिशत साधारण र ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको विकासमा जोड आदि आदि । यस्ता धेरै विषय छन् जुन घोषणा पत्र तथा सरकार आफंैले गर्छु भनेर जनतासमक्ष वाचा गरेका विषयहरू हुन् । यी वाचाहरूको थालनी र प्रगती कहाँ कहाँ पुगे ?
यता सरकारलाई दुई वर्षको उपलब्धि के लेख्ने ? कसरी गहकिला शब्दहरू राखी विकासका गतिविधिहरू भएको जानकारी दिने भनी खोतलिरहँदा उता दिल्लीमा चुनावको मतगणना चलिरहेको थियो । यसपटक पनि आम आद्मी पार्टीले भारी बहुमतसहित चुनाव जित्ने पक्का भइसकेको थियो । अन्ततः आम आद्मी पार्टीले चुनाव जित्यो । दिल्लीमा आमआद्मी पार्टीले यस्तो भारी बहुमत ल्याउनुको कारण के थियो ? भारतीय जनता पार्टीले केन्द्रीय तहमा कांग्रेस आईलाई लज्जास्पद हार खुवाई इतिहासमा भारी बहुमत ल्याएको यो दोस्रो पटक हो । भारतमा भाजपाको त्यत्रो लहरका बाबाजुद पनि दिल्ली जस्तो राजधानीमा राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा भाजपाको लज्जास्पद हार हुनुको कारण के हो ? भाजपाले दिल्ली चुनावमा आफ्नो केन्द्रीय तहका सम्पूर्ण नेतागणहरूको लर्को लगाउँदा पनि हार बेहोर्नुपर्‍यो । दुई रुपैयाँ किलो आँटाको प्रबन्ध गर्छु भनि भाजपाका केन्द्रीय नेताहरूले बोल्दासमेत दिल्लीका जनताले पत्याएनन् । यसको महत्वपूर्ण कारण भनेको आमआद्मी पार्टीको जनजनमा जितेको विश्वास थियो । दिल्लीको सार्वजनिक यातायातमा गरेको सुधार, महिलाहरूका लागि सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क यात्राको व्यवस्था, मासिक २ सय युनिटसम्मको बिजुलीको बत्तीको निःशुल्क व्यवस्था, करमा भारी छुट गरी १२ प्रतिशत करलाई ५ प्रतिशतमा झारेको, दिल्लीका कुनाकुनामा सिसिटिभीको व्यवस्था गरी चोरी, गुण्डागर्दीलाई नियन्त्रण गरेको, २० हजार विद्यालय भवनको निर्माण गरेको, जनताका लागि काम गरेको, प्रतिपरिवार मासिक २० हजार लिटर पानीको निःशुल्क व्यवस्थाजस्ता कार्यहरू गरेको थियो, जसको प्रतिफल यही चुनावले देखायो । दिल्लीमा सिसिटिभीको व्यवस्था गर्नका लागि उठाएको फाइल लामो समय केन्द्रीय सरकारसमक्ष अड्किँदा अरविन्द केजरीवाल स्वयं फाइल भएको अड्डामा १० दिन त्यहीं बास बसी फाइल सदर गरी ल्याएका थिए । आफै्र सावर्जनिक यातायातमा सवार भई जनताका यातायातका गुनासाहरू सुनेका थिए । प्रतिपरिवार औसतमा मासिक ५ हजार बचत हुने गरी हरेक पक्षमा छुटको व्यवस्था गरेका थिए । यसले दिल्ली जनतामा ३६ हजार करोडको बचत भएको थियो । जनतामा रकम बचत भए क्रय शक्ति बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ ।
उनले यो कार्य कसरी गर्न सम्भव भयो त ? भनी एक पत्रकारको जवाफमा कुनै पनि क्षेत्रमा करको वृद्धि नगरेको जवाफ दिएका थिए । यत्रो व्रmान्तिकारी कार्यको एक मात्रै उपाय थियो भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, जसबाट बचत भएको रकमलाई अनुदानको क्षेत्रमा प्रयोग गरे र त्यसको लाभ हाल दिल्ली जनताले पाइरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा भाजपाको चुनावी घोषणालाई दिल्ली जनताले पत्याउने कुरै थिएन । भाजपालाई अर्को ठूलो झट्का विवादास्पद नागरिकाता ऐन पनि थियो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा रहेका गैरमुस्लिमहरूलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो हुने व्यवस्था गरियो । यसबाट अल्पसंख्यक तथा गैर मुस्लिमलाई त फाइदा पुग्ला, तर करोडौं भारतीय युवा बेरोजगार रहेको, आर्थिक मन्दीको चपेटामा भारत गुज्रिरहेको, उधोगधन्दाहरू बन्द हुने व्रmम बढिरहेको सन्दर्भमा थपहुने यस्ता आयातित नवभारतीयबाट भारतमा झन ठूलो बेरोजागरीको अवस्था सिर्जना हुने जस्ता विषयहरूले बजार ओगटेको अवस्था थियो ।
सरकारले आफ्ना दुई वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा उसको चुनावी घोषणापत्र, सरकारको कामगराइको तौरतरिकालाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सूची थपिने व्रmम जारी छ, तर हालसम्म आयोजनाको पूरा हुने दर हेर्ने हो भने भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर पनि तोकिएको समयमा पूरा हुने अवस्था छैन । अन्य आयोजनाको प्रगति दर सन्तोषजनक छैन । करिब १८ सयजति निर्माण आयोजना अलपत्र र सरकारी लगानी डुब्ने अवस्थामा छन् । गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन, साथै निर्माणको व्रmम कछुवाको गतिमा छ । सप्तकोसी र नारायणीमा पानीजहाज चल्नका लागि जनता टिकट काट्ने प्रतीक्षामा छन् । निजी क्षेत्रले एक क्रुज निर्माण गर्दै गरेको अवस्था भन्दाबाहेक व्यावसायीक जहाज चल्ने छाँटकाँट नै देखिएको छैन । साना बोटहरू सप्तकोसीमा चले पनि लगानी सुरक्षा नभएको र हैरानी खेप्नुपरेको भनी आन्दोलनमा छन् । पश्चिमका जिल्लाहरूबाट तुइन पूरै विस्थापित हुने सम्भावना नै छैन । रेलको सर्वेमै पाँच वर्ष बित्ने भो । संघीयताको व्यवस्थापनमा बनेको र बन्ने व्रmममा रहेका धेरैजसो विधेयकहरू विवादास्पद नै बने । पानीजहाज कार्यालयले कुनै काम पाउन सकेको छैन । सरकारको काम र प्रगतिका बारेमा बोल्न नेकपाका नेताहरू नै हिचकिचाइरहेको छ । सानातिना र नियमित कामभन्दा बाहेक गेम चेन्जर विकासका कामहरू खासै हुन सकेका छैनन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालमा स्वागत गर्न पाउनु र केही भिभिआइपीको भ्रमणलाई नै उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको काम पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने अवस्था छैन । पानी आउने म्याद पटक पटक सारेको कारण मेलम्चीको कामको पनि जनतामा खासै उत्साह देखिँदैन ।
बरु निर्माला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, विवादास्पद विधेयक, एनसेलको कर प्रकरण, महरा काण्ड, सार्वजनिक जग्गा हत्याउने ललिताकाण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई बुझाउने, एमसीसीजस्ता कार्यले सरकारको छविलाई बरु धमिल्याउने काम ग¥यो । निर्मला हत्याकाण्डमा कि कसैलाई बचाउन खोजियो वा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लाग्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सकिएन । ३३ किलो सुन प्रकरणमा भरियालाई समातियो साहुजी खोज्दाखोज्दै छानविन समितिको म्याद नै नथपी घटनालाई ओझेलमा पारियो । बाइडबडी काण्डमा लेखा समितिमार्फत दोषी देखिएका व्यक्तिलाई यकिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा अर्को नाम र प्रयोजनविहीन समिति बनाई उक्त घटनालाई ओझेलमा पारियो । जनतासमक्ष छलफल नै नगरी कोठे बैठकबाट विधेयक ल्याइयो जुन बजारमा आउन नपाउँदै विवादास्पद बन्यो । आधा दर्जन विधेयकहरू यस्ता छन् । कतिपय विधेयक जनलहर ओर्लिएपछि फिर्ता लिइयो । ललिता काण्डमा जग्गा फिर्ता गरेपछि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने नयाँ चलन भित्र्याइयो । कानुन बनाई सरकारी जग्गा प्रतिस्पर्धामार्फत बढी कबोल गर्नेलाई भाडामा दिनुपर्नेमा कवाडीको मूल्यमा एउटै संस्थालाई दिइयो । एमसीसी इन्डोप्यासिफिककै एक रणनीति हो भनी अमेरिकी निकायहरू बोलिरहदाँ त्यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा पर्दैन र यसैको कारणले हाम्रो देशमा अमेरिकी सैनिक आउँदैन भनी वकालत गरिँदैछ, अर्थात् भनौं मानौं यो देशको जनता कुरै बुझ्दैनन् । जान्ने–बुझ्ने जति सरकारमा छन् ।
जनताले खोजेको विकासको मोडेल के हो ? स्पष्टै छ । घरमा चौबीसै घण्टा बिजुली आओस, चौबीसै घण्टा धारामा खानेपानी आओस, नजिकै राम्रो उपचार हुने स्वास्थ्य संस्था होस, नजिकै उच्च गुणस्तरको शैक्षिक संस्था होस्, त्यस्तै रोजीरोटीका लागि रोजगारीको व्यवस्था होस् आदि । हुन त सरकारले चालेका कदमले पनि माथिका जनताका आकांक्षालाई पूरा गर्न त सक्ला, तर त्यसका लागि जनताले लामो समय कुर्नुपर्ने निश्चित छ । जनकल्याणकारी सरकारले आफ्नो उपलब्धिको वकालत गरिरहँदा दुई वर्षको बीचमा मूल्यवृद्धि अकासिएको, बेरोजगारीको दर घट्न नसकेको, सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढेको, संघीयता सँगै करको दायरा र करको मात्रामा अत्यधिक बृद्धि भएको, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएको र निजी विद्यालयको शिक्षा सर्वसाधारणको महँगाइका कारण पहुँचबाट टाढिँदै गएको, काठमाडौंजस्तो महानगरमा खानेपानीको अभाव रहेको, सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुन नसकेको, धूवाँधूलो तथा कोलाहलबाट काठमाडौंवासीले राहतको सास फेर्न नपाएको, स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्र बढी मुनाफामूलक भई गरिब जनताले स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख हुँदै गइरहेको आदि अवस्थालाई भुल्नु हुँदैन । तस्कर, कालोबजारी, गुन्डागर्दी मौलाउँदै गएका, चेलीबेटीहरूको दिनहुँजस्तो बलात्कारको घटना बढ्दै गरेको, राज्य स्वयं केही व्यापारिक घरानालाई राज्यको सम्पत्ति सस्तोमा भाडामा दिँदा राज्यकोषमा जम्मा हुने अर्बौंका सम्पत्ति गुमेको, ठूलठूला भ्रष्टाचारलाई राज्यले संरक्षण गरेको, आयोजना ढिलाइ हँुदा ठेकेदारलाई कारबाही नगरी बरु भेरिएसनको मूल्य थप दिँदा आयोजनाहरू खर्चिलो हँुदै गएको जस्ता पक्षले राज्य कतातिर जाँदैछ भनी हेर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
यसअघिका सरकारले गरेका काम र तिनको गति र भारी बहुमतसहितको सरकारको कामको गति हेर्दा कुनै फरक देखिँदैन । बन्द–हड्ताल छैन, निर्माणका सामग्रीहरूको उपलब्धता बजारमा छ्यासछ्यास्ती छ, नाकाबन्दी छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सरसहयोगका कुनै कमी छैन, जनताको साथ छ, प्रतिपक्षीले कुनै विरोध गर्ने अवस्था छैन, सरकार एकलौटी एउटै पार्टीको छ, यति हुँदाहँुदै पनि सरकारको विकासको गति उही पुरानै पाराको देखिएको छ । यस्तै अवस्था भयो भने जनताले कोबाट अपेक्षा गर्ने ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी त्यसबाट आएको आम्दानीले दिल्ली सरकाले जनतालाई कति सुविधा दिएको छ यो लेखकलाई भन्दा बढी सरकारलाई नै थाहा होला । तर, हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा किन कमी आउन सकेन? एनसेलको बिव्रmीको पँुजीगत लाभकर कता गयो ? बाइडबढीको चार अर्बको घोटाला कता हरायो ? ३३ किलो सुन खै ? नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिलाम बढाबढमा भाडामा दिन नमिल्ने नै हो सरकार ? यस्ता ठूला कारोबार जसले राज्यको अर्थतन्त्रका ठूलो योगदान दिन सक्छ यस्ता विषयहरूमा सरकार मौन हुने अनि सानातिना आम्दानी भएको जनताबाट कर उठाउने र शासन गर्ने परीपाटीले देश कता जाला ? यस्ता क्षेत्रबाट राज्यको आम्दानी बढाउँदै लगौं र जनतालाई अधिकतमभन्दा अधिकतम सुविधा दिने मोडलमा विकासका गतिविधि लैजाओ । यसले जनतामा सुशासनको अनुभूति दिन सक्छ । कार्यकर्ताकै भरमा देश चल्छ भनेर सोच्नु दिवास्वप्न हुन्छ । जनता आफ्नो भए भने मात्र अर्को चुनावका लागि बाटो खुल्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीका जनता छन् । हिजोका दिनमा केही सूचना प्रविधि नहुँदा त जनताले शासकको व्यवहारको मूल्यांकन गरेकै थिए । राणा पनि यही जनताले ढालेकै हुन । पञ्चायत पनि यिनैले ढालेका हुन् । कांग्रेसलाई पनि बुहमत यिनै जनताले दिएका हुन् । माओवादीलाई पनि एकपटक ठूलो पार्टी बनाएकै हुन् । अहिले प्राविधिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि नेपाली जनताले भारी बहुमत दिएका छन् । यो अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्नैपर्छ । यो कारणले काम गर्न पाइन भन्ने छुट यो सरकारलाई छैन । गर वा मर भन्ने स्थितिमा यो सरकार छ । दिल्ली सरकारले जनताको मन जित्न के ग¥यो, यो त देख्नुभएकै होला । जनताको मन जिल्ने कोसेली फुकाउनुहोस् । काम गर्नका लागि अझै तीन वर्ष बाँकी छ । विगतका दुई वर्षमा सरकारले जे जसरी व्याख्या गरे पनि नियमित कामबाहेक खासै उपलब्धि भएको छैन । हिजोका कामको आत्मसमीक्षा गरी तीन वर्षमा देखिने ठोस र जनतालाई राहत हुने कामको प्याकेज ल्याउनुहोस । यसबाट जनताको भलाइ त छँदैछ, साथै नेकपाको पनि भलाई हुने निश्चित छ । अन्यथा इतिहासले दिएको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पछि पछुतो मान्नुको विकल्प छैन ।
यो पृष्ठभूमिमा यही भूगोलमा ‘आर्यहरूकै एउटा बगाल (दरद र नुरिस्तानी) इपू पन्ध्रौँ शताब्दीदेखि तेह्रौँ शताब्दीबीचमा यस प्रान्तमा खोलै खोला उक्लिसकेका अनेक पुरातात्विक प्रमाण (किथ, १९१३ इ., ‘द व्रात्याज’, टुची, १९४० इ., टिबेटन पिल्ग्रिम्स इन स्वात भ्याली, महेश्वर जोशी, २०१७ इ., हर्स इन रक ड्रइङ्स इन स्पिपत) पाइएका छन्’ भनेर प्राध्यापक माधव प्रसाद पोखरेल लेख्छन् । अर्कातिर बैकाल तालको क्षेत्रतिरबाट सिल्क रोड हुँदै मंगोलियनहरू यो भूगोलमा छिरेको देखिन्छ । त्यसरी नै अफगानिस्तान हुँदै आर्य र किराँत छिरेको इमान सी चेम्जोङ लेख्छन् । खुल्ला सिमानाका कारण भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट नेपालको तराईमा छिरेका जातजातिबारे विद्या वीर कंसकार लेख्छन् । यही पाटो केलाउँदा तिब्बतबाट छिर्ने अर्कोथरी देखिन्छ । समग्र यसरी सिकारी, हरुवा, चरुवा, खोरिया फाडदै भोजन खोज्नेहरूको थलो नेपाल देखिन्छ ।
यस पृष्ठभूमिलाई लिएर नेपालको बहिष्करण, समावेशीकरण र संयुकता खोज्नुपर्ने हुन्छ, जुन साह्रै जटिल विषय हो ।
सामाजिक समावेशीकरण आदानप्रदानका लागि प्रयोग गरिन्छ । यो सामाजिक एकता, सामाजिक एकीकरण र सामाजिक सहभागितासँग सम्बन्धित नै हो । विपरीत रूपमा यसलाई सामाजिक बहिष्कार र बहिष्करण बुझिन्छ । विस्तृत शृङ्खलालाई सन्दर्भमा जोड्दा अपाङ्गता, गरिबी र स्रोत र साधन बाट वञ्चितसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू, सीमान्तकृत व्यक्ति र ठाउँहरूका सम्बन्धमा प्रयोग गरियो । नेपाली सन्दर्भ अध्ययन गर्दा संविधान बनाउँदा होस् वा समाज कल्याण र सामाजिक योजनाहरू बनाउन यही विषयहरूलाई लिएर अध्ययन गरेको देखिँदैन तर क्रियाकलापहरू लिएर अध्ययन गरेको पाइन्छ । १ सय २५ जातजाति रहेको यस मुलुकमा संविधानमाथिको विवाद चलिरहेको छ तर पनि यस संविधानले सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरूको एक शृङ्खला समावेश गरेको देखिन्छ । राज्यमा आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत वस्तुहरू र सेवाहरू पुर्‍याउन दायित्वहरू ल्याएको छ । नेपालजस्तो शरणार्थी थुप्रिएको, खुला सिमाना भएको मुलुकमा अधिकारहरूको समावेशीकरण गर्न गहन, आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यीकीय क्षेत्रमा अनुसन्धानको विषय बन्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएन, यो दुर्भाग्य हो । हाम्रो वास्तविक आधारभूत धरातलको अध्ययन भएन यहाँ गैरसरकारी संस्था र त्यो सँग जोडिएका प्राध्यापक हाबी भएको देखिन्छ !
नेपालको परिप्रेक्ष्य अध्ययन गर्दा अपाङ्गता भएका, गरिबीको रेखामुनि रहेका, जातजातीय छूवाछूतबाट पीडित साथै छूवाछूतभित्र नै छूवाछूत प्रस्ट देखिन्छ, जस्तै : कामी, दमाईं, सार्की र गाइनेबीच नै बिहेबारी नचल्ने, पानी नचल्ने बिटुलो–छूवाछूत देखिन्छ । त्यस्तै, नेवारहरूभित्र पनि विभिन्न उपसमूह देखिन्छन्, बाहुनभित्र पनि यही समस्या अर्थात् जातजातिभित्र नै अर्को संस्कार नचल्ने देखिन्छ । प्रस्ट, यो विषय सजिलो छैन, धेरै गहिरो छ । प्राध्यापक माधवप्रसाद पोख्रेलका अनुसार तगाधारी क्षेत्री, मतवाली क्षेत्री, कुकुडे– कुखुरा काट्ने बोहरा, कर्णालीमा चार राठ, बाह्र राठका बाहुन, कोही छोरी दिने बुहारी नल्याउनेसम्म उल्लेख गरेका छन् । यो बाहुन र क्षेत्रीभित्र नै जटिलता देखिन्छ भने बिटुलो जात भनेर भनिएका तिर कामीहरूमा मिझार (फलाम), सुनार (सुन), कसारा (काँस), टमोट्टा (तामा), लोहार (फलाम) र ओड गरी ६ प्रकार औँल्याएका छन् । त्यस्तै दमाईंतर्फ, दमाईं (दमाहा), हुड्के (हुडको), आउँजी (लुगा) गरी तीन वर्गीकरण पाइन्छन् भनी प्राध्यापक पोख्रेल “कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र सांस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन’ मा लेख्छन् । प्राविधिक सीप भएका, परम्परागत टेक्निसियन यी हाम्रो जातजातिहरूबीच नै संस्कार र रहनसहन भिन्न–भिन्न पाइन्छ, अर्थात् यहीभित्र पनि जात–जातीय बहिष्करणको ठूलो समस्या छ । यसरी नै तराई र हिमाली भेगमा पनि छ, तर हिमाली भेगको दलितलाई संविधानमा उल्लिखित गरिएको देखिँदैन ।
हाइड्रोपावर लगानीकर्ताहरूको आश
कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांशको घोषणा गरिसकेका छन् भने कतिपयले गर्न सकिरहेका छैनन् । यस कारणले पनि हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा सुधार हुन नसकेको कतिपय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लाभांश दिने कम्पनीहरूमा बुटवल पावर कम्पनीले २८ प्रतिशत, चिलिमे हाइड्रोपावरले २५ प्रतिशत, सानिमा माई हाइड्रोपावरले १० प्रतिशत प्रतिफल दिएका छन् भने ङाडी ग्रुप पावरले १० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । अरू केही हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले ३ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांश दिएका छन् भने कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीहरू नोक्सानीमा नै रहेका पनि छन् । त्यसो त हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले प्रतिफल केही वर्ष ढिलो पाउने गरेका पनि छन्, जसका कारण हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयरधनीहरू दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् ।
भ्रमण वर्षमाथि कोरोनाको ग्रहण
भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामै हामीलाई हलुवामा बालुवा भएको छ । हालसम्म वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गर्न बाँकी नै रहेको कोरोना भाइरसले विश्वभरि आतंंकित बनाएको छ । चीनबाट सुरु भएको यो भाइरसकै कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले संसारैभरिको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटकालको घोषण गरि सकेको छ भने यो पंक्ति तयार गरुन्जेल चीनमा झन्डै ६ सय ५० जनाको अन्त्य भइसकेको र ३० हजार व्यक्ति यसबाट संक्रमित भएको खबर बाहिर आएको छ । चीनको भाइरस प्रभावित क्षेत्रमा रहेका अन्य विदेशीहरू तत्कालै फिर्ता भए । तर, नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउन ढिलो भई स्वास्थ्य मन्त्रालय घेर्नसमेत नेपालीहरू पुगिसकेका छन् । यता चीनतर्पmका हाम्रा नाकाहरू बन्द हँुदा स्थानीय मात्र होइन, आवतजावत गर्ने धेरै स्वदेशी विदेशीहरू बढी प्रभावित हुनुका साथै व्यापार–व्यवसायमा समेत यसले पार्ने असर धेरै छ । हामीले मनाइरहेको भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा समेत चीनबाट धेरै पर्यटकहरू यहाँ आउने आकलन गरिएको थियो । गत जनवरी महिनाको पर्यटक आगमनको तथ्यांक जम्माजम्मी ६६ हजार हेर्दा पनि हामीलाई हलुवामा बालुवा लागेजस्तो हुन आएको देखिन्छ । हामीले सोचेको २० लाख पर्यटकको संख्या पुग्न प्रतिमहिना डेढ लाखभन्दा बढी हुनु पर्छ ।
आधुनिक युगलाई पर्यटकीय युग भन्दा हुन्छ । विश्वभरि यसक्षेत्रको प्रभाव अधिक छ । संसारभर पर्यटन क्षेत्रबाट हाल १० करोडले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । वल्र्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनका अनुसार संसारमा आतिथ्यता सत्कारकै लागि भनौँ पर्यटन क्षेत्रकै लागि २.२ ट्रिलियन यूएस डलरको लगानी छ । संसारभर घुमफिर गर्ने, बिदा मनाउने, मनोरन्जन गर्ने बानी प्रायः आर्थिक हैसियत भएका सबैलाई बसेको छ । नेपाल पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान भएको देश हो । र पनि पर्यटनक्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको गुणस्रीयतामा कमी छ यहाँ । यस क्षेत्रमा आवश्यक सक्षम जनशक्ति तया गर्ने क्रममा सरकारी स्तरमा पर्र्यटन मन्त्रालय मातहत पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान छ । वि.सं. २०२९ सालमा स्थापना भएको यस संस्थाले विभिन्न खाले जनशक्तिको तयारी गर्छ । ४० भन्दा बढी कलेज एवं अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले यस्तै खाले जनशक्ति निर्माण गर्दैछन् । यस क्षेत्रको जनशक्ति साविकभन्दा बढे पनि गुणस्तरमा बढोत्तरी भएको छैन । तालिम प्रप्त जनशक्ति ७० प्रतिशत त बिदेसिएका छन् । साँच्चै भन्नुपर्दा टुर गाइडकै कमी छ यहाँ । प्रतिष्ठान आपैmँले तयार गरेका टुर गाइड ५ हजारजति मात्र छन् । प्रतिष्ठानले पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा, लुम्बिनी, पाल्पा, चितवन आदि क्षेत्रमा यस्ता जनशक्ति तयार गरिरहेको छ । हामीकहाँ पर्यटनक्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनशक्ति समग्रमा ५२ हजारभन्दा बढी रहेका र आगामी ५ वर्षभित्र यस्तो जनशक्ति दोब्बर गराउने सरकारी अवधारणा देखिन्छ । सातै प्रदेशमा प्रतिष्ठानले टुर एवं ट्रेकिङ गाइड तयार गर्ने लक्ष्य पनि लिएको देखिन्छ । टुर एवं ट्रेकिङ गाइडहरू औपचारिक अनौपचारिक रूपमा झन्डै डेढ लाखले यहाँ रोजगारी पाएका छन् । २० लाख पर्यटक भिœयाउने सरकारी नाराका लागि यो संख्या कम हो ।
हिजोआज सबैको मुखमा सुनिन्छ : पर्यटन, टुरिस्ट, पर्यटक, टुरिजम आदि । टुरिजम वास्तवमा फ्रेन्च शब्द हो । १९ औं शताब्दीदेखि यस शब्दले बढी प्रश्रय पाएको हो । पर्यटक भनौं वा टुरिस्ट शब्द लेटिन भाषा हो । कुनै कामले, उद्देश्यले मुलुकभित्र वा बाहिर घुम्न जाने व्यक्ति वा समूह भनेको पर्यटक हो । पर्यटक आन्तरिक र बाह्य दुई थरीका हुन्छन् । पर्यटन भन्नु र पर्यटक भन्नु पर्याय हुन् । डब्लूटीओको परिभाषाअनुसार स्वदेश वा अर्को देशमा बिदा, बिजनेस वा कुनै मिसनले भ्रमण गर्नेलाई पर्यटक भनिन्छ । समयावधि भने एक दिनदेखि सय दिनसम्मको बसाइ उद्देश्य राखी भ्रमण गर्नेलाई पर्यटक भनिन्छ । सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालमा आउने पर्यटक भौतिक सुख सुविधाका लागि भन्दा पनि आध्यात्मिक शान्तिका लागि हो । प्राचीन समयदेखि नै देश देवभूमि, वैदिक भूमि, पवित्र भूमि हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुझाउनका लागि एकमात्र विश्वकै नमुना पूर्वीय धर्म–संस्कृतिको धरोहर देश भन्ने पहिचान देशले गुमाउनु हुँदैन । देश धर्म–निरपेक्षको पंक्तिमा परेको छ । तथापि हाम्रो मुलुकमा अधिकांश पर्यटकीय तीर्थ क्षेत्र हिन्दू धर्म, दर्शन, संस्कृतिमा आधारित छ । पछिल्लो समय भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा भारतका ख्यातिप्राप्त धर्मगुरुलाई सद्भावना राजदूतका रूपमा आत्मसात् गरेको देखिन्छ, धार्मिक मुलुक भारतमा मूम्बई, चेन्नई, दिल्लीजस्ता विभिन्न सहरमा यसको प्रचार–प्रसार गरिएको देखिन्छ । चीन, हङकङ, अमेरिका, युरोपसम्म अभियान भनौं नाराको पहुँच पुगेको देखिन्छ । चिनियाँ भाषामा नेपालबारे प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू भएको देखिन्छ । भाषा प्रशिक्षण, तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा कमी छैन ।
प्राचीन नेपाल लिच्छविकालमा चिनियाँ यात्री फाइयानले हाम्रो कपिलवस्तुमा सन् ३९९ देखि सन् ४१४ सम्म भ्रमण गरेको इतिहास भेटिन्छ । पछि सन् ६२९ देखि ६४५ सम्म चिनियाँ यात्री दुःख साङले नेपाल भ्रमण गरी नेपालकै विषयमा धेरै कुरा लेखेको इतिहास छ । मल्लकालीन इतिहास हेर्दा भोट चीन व्यापारिक कारण विदेशीहरू नेपाल आउने गरेको पाइन्छ । नेपालीहरू पनि विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा अरनिको, नेपाली भृकुटीको कथा हामीले विद्यालय कक्षामै पढेका हौं । त्रेतायुगमै रामजानकी बिहे, द्वापर युगमा श्रीकृष्णको नेपाल यात्रा धेरै छन् यस्ता युगीन इतिहासहरू ।
मुलुकमा ३ वर्षसम्म चालू रहेको चौधौं योजना यसै वर्ष २०७६ असारमा सम्पन्न भएको छ । यस योजनाको अन्तसम्म विदेशी पर्यटक आगमनको संख्या १२ लाख पुर्‍याउने, विदेशी पर्यटकको बसाइ अवधि सरदर १५ दिन पु¥याउने, सरदर दैनिक खर्च ६० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रबाट योजनाको प्रथम वर्ष २५ हजार व्यक्ति, दोस्रो वर्ष ४० हजार व्यक्ति र अन्तिम तेस्रो वर्षमा ४५ हजार व्यक्तिले थप रोजगारी पाउने लक्ष्य पनि योजनाले लिएको थियो । प्राकृतिक, साहसिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिले नेपाल विश्वकै एक पर्यटकीय गन्तव्य हो । जीवन्त संस्कृति बोकेको नेपालले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि बोकेको छ । हिन्दूहरूको शिरभाग पशुपति क्षेत्र, बुद्धिस्टहरूको केन्द्र भाग लुम्बिनी यहीँ छ । हिमाली, पहाडी र तराईका भौगोलिक विविधता, समुद्र सतहदेखि ७० मि. मात्रको उचाइ पनि यहीँ रहेको छ । विश्वका दुर्लभ पाटे बाघ, काँडे भ्याकुर, धेरै प्रजातिका चरा, जीवित देवी कुमारी र असंख्य चाडपर्व, जात्राहरूले नेपाल र नेपालीको छुट्टै चिनारी छ ।
पर्यटकीय गन्तव्यको विविधिकरण गर्दै नयाँ पर्यटकीय स्थलको चिनारी दिँदै पर्यटन उद्योगलाई फस्टाई देशको समृद्धिको यात्रा तय गर्ने प्रशस्त सम्भावना छन् यहाँ । पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासबाट रोजगारीको सिर्जना, गरीबी न्यूनीकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, जीवनस्तरमा सुधार हाम्रो आवश्यकता हो । राजनैतिक संक्रमण लामो समयसम्म रहेकाले पर्यटन विकासमा गम्भीर चोट लाग्न पुग्यो विगतमा । पर्यटन पूर्वाधार विकासतिर खासै चासो भएन । विनाशकारी भूकम्पले अर्को घाटा लगायो । आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन विकास भन्ने राज्यको सोंच छ । यसका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य देखिन्छ । देशलाई आकर्षक तथा थप सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा विकास गर्दै पर्यटको आगमनलाई वृद्धि गर्ने जनताको आयस्तरमा बढोत्तरी गर्ने सरकारी लक्ष्य देखिन्छ । पर्यटकीय गन्तव्यस्थल र उपजमा विविधीकरण र विकास गर्ने नेपालमा प्रमुख पर्यटकीय उपजहरूको बजारीकरण गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी उद्देश्य देखिन्छ । यसका लागि राज्यले लिएको रणनीति हेर्दा पर्यटन विकास गर्न सार्वजनिक, निजी, सरकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्ने देखिएको छ । ग्रामीण पर्यटनमार्फत यस क्षेत्रलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने रणनीति देखिन्छ । मुलुकका सबै मौसममा पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आन्तरिक पर्यटन लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति सरकारले आफ्नो योजनामा राखेको देखिन्छ । यसका लागि पूर्वाधारको विकास, संस्थागत सुधार र पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम तय हुनुपर्छ ।
यता जात्रैजात्राको देश घोडे जात्रा, इन्द्रजात्रा, कुमारी जात्रा, बिस्केट जात्रा, भोटोजात्रामा विदेशीहरूको उपस्थिति देखिनु अनि भक्तपुर, काठमाडौं पाटन क्षेत्रमा स्मारक, स्तूप, मन्दिर, चैत्यहरूमा देखिने विदेशीहरूको घुइँचोले पनि नेपालको मौलिक कला, संस्कृतितर्फ विदेशीहरू झुम्मिने गरेको तथ्य देखिन्छ । वातावरणीय समस्या, प्रदूषणजस्ता विषयहरूम राम्रो ध्यान दिन सकिएको छैन । स्थानीय साधनको प्रयोग गर्दै होमस्टेको अवधारणाका लागि पर्यटक स्तरीय कोठा, शौचालय, वातानुकूलित अवस्था सिर्जना गर्न सकिएको छैन । विश्वभरि नै लोकप्रिय भएको पर्यावरणीय पर्यटनमा हामीले ध्यान पु¥याउन सकेका छैनौं ।